Sony's Xperia Z4 Tablet izao dia ofisialy miaraka amin'ny efijery 10.1 "| Androidsis
Manuel Ramirez | | MWC, About us, Sony, Takelaka Android
Nandritra ny fiandrasanay izay nolalovan'i Sony tao amin'ny Mobile World Congress izay atao anio any Barcelona, niseho ny tsy nampoizina rehefa tamin'ny herinandro lasa dia nanomboka izy ireo hahazoana tsiranoka sasany mifandraika amin'ny takelaka vaovao izay hiseho ankehitriny.
Sony dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Xperia Z4 Tablet tao amin'ny Mobile World Congress any Barcelona. Ny takelaka avo lenta dia miavaka amin'ny efijery misy fehin-kevitra 2K sy a Qualcomm Snapdragon 810 octa-core puce ao anaty vatana iray izay 6.1 milimetatra fotsiny ny hateviny. Fanampiny vaovao natolotry ny orinasa Japoney izay angamba antenaina hiseho miaraka amin'ny sainam-pirenena vaovao Z4, saingy ho avy io aoriana kelin'izay ho fahavaratra.
1 Takelaka tokony ho raisina
2 Fomba hafa
2.1 Hevitra fototra
Takelaka tokony ho raisina
Ireo fitaovana Sony lehibe teo aloha dia efa nisy fiatraikany lehibe ary iray amin'ireo afaka nifaninana, amin'ny ampahany, manohitra ny maodelin'i Apple. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nahita takelaka iray izahay Izy io dia manana vahaolana 2048 x 1080 miaraka amin'ny efijery 10.1-inch izay manana hakitroka pixel 229 PPI.
El 64-bit octa-core Snapdragon 810 puce dia miverina amin'ny 2.0 GHz, RAM 3GB hiaraka aminao sy fahatsiarovana anatiny 32 GB, izay azo hitarina amin'ny alàlan'ny fampiasana karatra microSD hatramin'ny 128 GB. Ny Xperia Z4 Tablet dia hatolotra ao amin'ny LTE ary koa fanontana Wi-Fi ihany. Ny loko izay ahazoana azy dia tsy miova firy amin'ny mainty sy fotsy.
Famaritana hafa momba ny Xperia Z4 Tablet dia a Fakan-tsary 8 MP ao aoriana ary eo anoloana 5.1 MP Zoro malalaka natao ho an'ny fanaovana selfie avo lenta. Ny iray amin'ireo singa ilaina indrindra amin'ny fitaovana an'ity karazana ity misy refy lehibe kokoa noho ny mahazatra dia ny bateria, eto amin'ny 6000mAh izay hamela, raha ny filazan'ny Sony tenany ihany, ny mitondra playback video hatramin'ny 17 ora.
Azontsika atao ny miantehitra amin'ny Mode Stamina Sony hanitatra ny androm-piainany ary ankoatra ny antsipiriany hafa dia ny fanafoanana ny feo sy ny tabataba 3D rehefa manao antso an-tsary. Ny rindrambaiko ananan'ilay takelaka dia Android 5.0, ary mba hamaranana dia afaka manonona ny refy misy 167 x 254 x 6.1mm isika, miaraka amin'ny maodely Wi-Fi milanja 389 grama raha ny LTE miaraka amin'ny 393gr. Toy ny fitaovana Sony hafa, voamarina IP68 ho fanoherana ny rano sy ny vovoka izy.
Efijery 10.1 inch (2560 x 1600)
Qualcomm Snapdragon 810 puce amin'ny octime core 2GHz 64-bit
32GB fitehirizana anatiny mivelatra amin'ny alàlan'ny microSD hatramin'ny 128GB
Fakan-tsary 8 MP
Fakan-tsary 5 MP
IP65 sy IP68
Refy: 167 x 254 x 6.1 mm
Milanja: kinova WiFi 389 grama, Wi-Fi + LTE 393gr
Ny fisian'ny takelaka ao amin'ny fanontana LTE sy Wi-Fi ho an'ny volana Jona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sony Xperia Z4 Tablet izao dia ofisialy miaraka amin'ny efijery 10.1 ″ 2K sy chip Snapdragon 810
Ekipa Actimel, lalao zaraina amin'ireo ankizy kely ao an-trano